နောက်ဘယ်နှနှစ်ဆို သူသီချင်းဆိုတာ နားထောင်ရမလဲ?
ဘရာဗို ....ရွှီး ..ဖြောင်း ဖြောင်း .. ဖြောင်းး
(လေချွန်သံ နှင့် လက်ခုပ်သံ များပါ ။။ သေနပ်သံ လို့အထင်လွဲ နေမစိုးလို့)
လိဒ် တီးတာ လေး .. မိုက်ပါ၏ ..
နောက်တခါဆို သားလေးနှင့်အတူ တွဲ ပြီး ထည့်ပေးစေချင်ပါသည် ။
once more ! ! !
စာတွေရော ကဗျာတွေပါ စောင့် မျှော် နေလျှက် ...
အိမ်နားနီးရင် ကောင်းမယ် အစ်ကိုရာ
အကိုနော် ကလေးကြည့်ခိုင်းထားတာမကြည့်ပဲ ဂစ်တာတီးနေလို့
ကျနော့်အကို လက်သံ ၃ ခါနားထောင်သွားတယ်
ဟုတ်ကဲ့ ကလေးငိုသံကို အသေအချာ နားထောင်သွားပါတယ်...း)
စာမူခကို အပြည့်ပေးခလိုက်ပါတယ် ...။
အသိတွေဆိုတော့ အထူးနှုန်းနဲ့ စာမူခပေးခဲ့ပါတယ် ...။
Noise တွေရော Spike တွေကြားက ခဲရာခက်ဆစ်နားထောင်ခဲ့ပါတယ် ...။ :P ။ သိင်္ဃသူ့သမီးကျောက်စာမှာပါတဲ့ ချစ်သော မျက်စိဖြင့် ရှုတယ်ဆိုတာမျိုး ... ခင်မင်သော နားတွေနဲ့ပဲ နားထောင်သွားလိုက်တယ် ...။ အဆင်ပြေပါတယ် ...။ ဟိုတစ်နေ့ကပဲ Santana တီးထားတဲ့ တစ်ပုဒ်နားထောင်လိုက်သေးတယ် ...ဟော်လို တစ်လက်၊ solid တစ်လက်နဲ့ ... Maria သီချင်းကို တီးတာ ...။
အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ကိုအောင်သာငယ်ရေ ..။ အစ်ကို့ရဲ့
ချစ်စရာကလေးသုံးယောက်က နှလုံးသားမှာတပ်ထားတဲ့ ကြိုးသုံးချောင်းလိုဖြစ်နေမှာပါ ...။ အကိုလည်း သူတို့ရယ်သံ တလွင်လွင်နဲ့ပဲ ... ဒုလ္လဘကြီးဆိုတာကို မျက်စိမှိတ်ချိုမြိန်ရတော့မယ်ထင်ပါရဲ့ ....။
စာလာဖတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ယောက် စိတ်ချမ်းသာသွားတာလေးကို စားသုံးနေတဲ့စိတ်ဟာ ... တနင်္ဂနွေ ဆန်နေမယ်လို့ ယုံကြည်စွာဖြင့် ...
ဒီသီချင်းအလိုက် ကြားဖူးတယ် ထင်တယ်...
ကလေးကလဲ အဖေ့ကိုအားကျလို့ ဟဲချင်နေပုံရတယ်...
နောက်ဆို ကွန်ပြူတာကိုပါ လာလုလိမ့်မယ်...